Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Xuseen Muxamad Al-Cumari
Xuseen Muxamad Al-Cumari
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanku waxa ay bixinaysaa abaalmarin $5 Milyan oo doolar warka la xiriira oo keeni kara in la xiro/cadaaladda la hor keeno Xuseen Muxamad Al-Cumari
Xuseen Muxamad Al-Cumari waxaa doonaya FBI ka dib markii uu sheegtay inuu ka qayb qaatay weerarkii loo gaystay diyaaraddii Pan America duulimaadkeedii 830 ee Agoosto 11, 1982 kaasoo sababay dhimashada qof rakaabka ka mid ah isla markaana ay ku dhaawacmeen 16 qof iyo isku day loo gaystay 267 qof oo rakaab ah iyo shaqaalaha diyaaradda. Al-Cumari waxuu ka mid ahaa sadex qof oo lagu soo oogay falal argagixiso iyo in ay sameeyeen waxyaabaha qarxa kaas oo ku qarxay diyaarad u kala gooshaysay Narita, Japan iyo Honolulul, Hawaii.
Al-Cumari waxaa maxkamadda Degmada Kaloombiya ee Marykanku ay ku soo oogtay: (1) Maleegidda dhagar dagaal gacan ka hadal ah iyo dhibaato loo geysto hanti; (2) Maleegidda dhagar oo dil lagu geysto; (3) dil (4) afduub diyaaradeed; (5) dhaawac loo gaysto diyaarad iyadoo la adeegsanayo ganacsi dibadeed; (6) waxyaabaha qarxa oo la saaray diyaarad; (7) dagaal gacan ka hadal ah; (8) isku dayid afduub diyaaradeed iyo; (9) gacan siin iyo gargaar u fidin. 1998kii, isaga oo ka qayb qaadanaya, Maxamad Rashiid, oo saaray waxyaabaha qarxa (bombo) diyaaradda, waa la soo xiray waxaana la keenay dhulka Mareykanka. Waxa uu qirtay doorka uu ku lahaa qarxinta waxaana uu balan qaaday inuu gacan saar la samaynayo baaritaanka taas oo qayb ka ahayd heshiiska uu galay.
Waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee waxyaabaha qarxa u sameeya oo hogaamiya kooxda “15ka Maajo” ee argagixisada ah, Al-Cumari waxaa dacwad ku soo oogtay dawladda Faransiiska doorkii uu ku lahaa weerarkii banbaanada ahaa ee lagu weeraray dukaamada Marks iyo Spencer ee ku yaal Baariis iyo daanta wabiga Leumi.
Al-Cumari waxaa suurto gal ah in uu wato baasaboor dawladda Lubnaan, taasoo la soo sheegay in ay xaaskiisa degan tahay. Waxa uu dhalay laba wiil iyo laba gabdhood. Waxa uu dhawr sano degan yahay Ciraaq. Inkastoo aan iminka la ogsooneyn halka uu ku nool yahay, waxaa suurto gal ah inuu degan yahay Lubnaan ama Ciraaq. Waxaa la soo sheegay inuu markasta oo uu safrayo uu hubeysan yahay waana in loo arkaa qof hubaysan oo khatar ah.
Taariikhda Dhalashada: Qiyaastii 1936
Goobta Dhalashada: Jaafa, Israa’iil
Dhererka: 5’6 - 5’8” (66 - 68 cm)
Timaha: Madow/dameeri,bidaar soo galayso
Shaqada: Makaanik, waayo aragnimo u leh waxyaabaha qarxa.
Calaamadaha Jidhka: Xagatin ku leh faraha midigta taas oo gaarsiisan ilaa gacanta hore; xagatin ku leh gacanta bidix taas u dhaxaysa suulka iyo murugsatada
Magacyada La Sheegto: Xuseen Muxamad Al-Cumari, Abuu Ibraahim, nin ka samaaysan waxyaabaha qarxa